Ngomhla ka-Matshi 2018 | Iindaba ze-NAB | I-2020 I-NAB bonisa i-Media Partner kunye noMvelisi we-NAB BONISA LIVE. Iindaba zeeNjineli zoSasazo
Ikhaya » 2018 » EyoKwindla
Archives Monthly: Matshi 2018
Umklami weMveliso yeJunior
Isikhundla: Inkampani Yomklami Wemveliso: 23andMe Indawo: Intaba Jonga i-US Iqela lethu elikhulayo leMveliso yoKwakha lifuna uMyili weMveliso ekhethekileyo ukuze ancede ukwakha amava asebenzayo kunye namava achaza abantu ukuba baqonde kwaye bathathe inyathelo kwiinkcukacha zabo zofuzo. Le nxaxheba ingaba yi-web ephendulayo okanye i-mobile focal-focused, kuxhomekeke kumava akho. Kwi-23andMe, uyila ...
Injineli yoLondolozo lwezeMedia Technology
Isikhundla: Inkampani yeNkampani yezoLondolozo lweeNkcazo zeNkampani: iNew York NY US ISebe le-NBC NewsNews yeSebe loLondolozo lweeNjineli lijongene neenkqubo kunye neenkqubo ezixhasa ukusetyenziswa kweendaba kunye nokuveliswa kwemveliso yethu ye-NBC. Ngomsebenzi ophakathi kwiseNew York, i-NY iqela lijolise ekwakheni, ekuxhaseni nasekugcineni izixhobo zokusasaza kunye nesofthiwe esukela kwi-ingest, editing, ...
UMlawuli weTV / Media Media
Isikhundla: UMlawuli weNkampani yeTV / yosasazo yeNkampani yeendaba: Indawo yeNdlebe: Ukujonga intaba CA US Sise-Eargo kwaye sikwimishini… .ukuphazamisa nokuguqula imveliso yezempilo yokuva, ngonaphakade! Ukuba ukuphazamisa ayisiyonto uyikhangelayo, sicebisa ukuba uqhubele phambili nokuthumela umsebenzi olandelayo. Sijonge abo bantu banomdla abaziphosa ebhedini kusasa baphupha ...
Isikhundla: Inkampani yezobuNjineli boSasazo: iNew York NY US E sekelwe kwiofisi yethu yaseNew York, iFuse Media okwangoku ifuna unjiniyela onobungqina bokusasaza ukuqinisekisa ukuba zonke iinkalo zobugcisa zenkqubo yokuphumla zihamba kakuhle. Le nxaxheba inceda ukuxhasa uluhlu olubanzi lwezisombululo zevidiyo zedijithali kunye nezixhobo, kuquka yonke into esuka kumaseva evidiyo edijithali elula kunye ...
Umlawuli weeVidiyo zoPhuhliso
Isikhundla: UMlawuli weNkampani yokuPhathwa kweVidiyo: Ukunyaniseka kweNgingqi: I-Mountain View ye-CA Injongo ye-Udacity kukudemokhrasi kwimfundo. Siliqonga lokufunda elikwi-Intanethi elinikezela ngemfundo eyothusayo kumacandelo anje ngobukrelekrele bokwenziwa, ukufunda ngomatshini, iirobhothi, inyani ebonakalayo, kunye nokunye. Ijolise ekuzixhobiseni ngokwakho ngokufunda, Ukunyaniseka kwenza ubuchwephesha obutsha obunje ngeemoto ezizisebenzelayo ezifumanekayo kuluntu lwehlabathi olunqwenela ...
Umqhubi weNkcazo yeVidiyo ePhambili
Page 1 of 9812345 » 102030...Gqibela »